Ra’iisulwasaaraha XFS Kheyre Oo Si Kulul Uga Hadlay Qarixii Muqdisho, Baaqna Deg Deg Ahna U Diray – RadioQandala.com
Ra’iisulwasaaraha XFS Kheyre Oo Si Kulul Uga Hadlay Qarixii Muqdisho, Baaqna Deg Deg Ahna U Diray
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa caawa ka hadlay qaraxii galabta ka dhacay Isgoyska Zoobe, kaasoo dad fara badan ay ku dhamaadeen.
Ra’iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay qaraxan inuu ahaa mid argagixiso oo muujinaya naxariis la’aanta Kooxaha nabad diidka, isagoo xusay in dhamaan dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay ay ahaayeen shacab aan waxba galabsan.
Waxaa uu sheegay uu ku baaqay in loo gurmado dadkii ku waxyeeloobay qaraxa, isagoo dadka Soomaaliyeed si gaar ah uga qeyb qaataan gurmadka dadka u baahan kaalmada.
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa caawa booqanayay isbitaalada oo la gaarsiiyay dhaawacyo ku dhow boqol, kuwaasoo qaarkood u baahan dhiig.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa dhiig u shubay dadkii u baahan dhiiga, waxaana Isbitaalada ka socota qeyla dhaan dhiig.
Inta badan waddooyinka ayaa xiran, waxaana adag in dadka ay tagaan Isbitaalada, si ay dhiig u bixiyaan.
Dhinaca kale waxaa socda gurmadka dadka ku jira dhismayaasha hoostooda, waxaana gaadiidka cagaf cagafta ay ka qeyb qaadanayaan bur burka hoostiisa la faago, si hadii dad ku jiraan looga soo saaro.
Dad badan ayaa lagu la’yahay nolol iyo geeri, waxaana goobta qaraxa ka dhacay laga garan waayay meydadka rag iyo dumar.
Waa qaraxii ugu weynaa ee ka dhaca Muqdisho taariikhda, inta la xusuusto qaraxii ugu weynaa ee Muqdisho soo mara, dad ka badan boqol ruux ku dhintaan wuxuu ahaa kii Hargaha iyo Saamaha ka dhacay sanadkii 2011.
« XOG CUSUB OO HADA SOO GAARTAY RQ : M/weynaha Somalia oo casumaad deg deg ah u fidiyey Madaxda D/gobaleedyada ee dhawaan soo saaray go’aamada?
Dawladda Qadar oo diyaarado gurmad sida usoo duulinaysa Muqdisho & DF Somalia oo hakisay. »